Fonon-tanana sy famokarana fonon-tànana any Shina | Yiwu Shunshui
Tsy mijanona fotsiny ny asa satria milatsaka ny mari-pana, fa raha tsy misy fonon-tànana mety, maharary tokoa ny mamita ny asa amin'ny hatsiaka. Noho ny insulation, ny coating tsy tantera-drano ary ny fanitsiana betsaka kokoa amin'ny fonon-tànana amin'ny ririnina tsara indrindra, ny fitaovana mangatsiaka sy ny rantsantanana mafy dia tsy ho olana. Noho izany, azafady araraoty ny rantsan-tànanao ary anaovy fonon-tànana tsara ireto mba hikarakarana ireto entana ireto:
Ny fonon-tànana amin'ny ririnina dia tsy mitovy amin'ny fonon-tànana izay ampiasainao matetika mba hanatsarana ny tontolo iainana sy ny asa mafana sasany. Tsy maintsy mahafeno ny fepetra hafa rehetra izy ireo mba hisorohana ny alahelo sy ny ratra. Rehefa mividy ny fonon-tànana amin'ny ririnina tsara indrindra dia mila dinihina ireto zavatra manan-danja manaraka ireto.
Ny asa ririnina dia mazàna midika fanamboarana mekanika vonjy maika na fanesorana oram-panala, nefa mety misy koa tetik'asa maro izay tsy manam-potoana fotsiny ianao mandritra ireo volana maivana kokoa. Raha te-hanamboatra fanamboarana mekanika ianao dia tsy maintsy miovaova ny fonon-tànanao mba hahafahan'ny rantsantanan-tànanao mandray mora foana ireo fitaovana kely. Tokony ho manify ihany koa izy ireo mba hidirana amin'ny toerana tery, toy ny kompartin'ny motera mametra. Ho an'ny fanesorana oram-panala sy asa hafa misy fepetra ara-teknika ambany, ny fonon-tànana amin'ny asa dia tokony ho matanjaka sy tsy tantera-drano mba ho maina sy mafana hatrany ny tanana. Ny asa lehibe iray dia ny fisorohana ny oram-panala amin'ny hidin-tànana amin'ny tanany.
Ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fonon-tànana mekanika sy nentim-paharazana dia matetika samy hafa be. Ny fitaovana synthetic (toy ny nylon, spandex, ary polyester) dia mahazatra amin'ny fonon-tanana mekanika. Ireo fitaovana ireo dia henjana, tantera-drano, maivana ary manify mba hanomezana fahafaha-misaina ary mety amin'ny fametrahana azy amin'ny toerana tery. Amin'ny tetikasa hafa, fonon-tànana mavesatra kokoa vita amin'ny hoditra voasesika no manaparitaka ny hafanana ao anatiny, ary ny ivelany kosa dia mangatsiaka sy tsy mahazaka rano. Mety ho voahofana volon'ondry mihitsy aza izy ireo mba hitazomana ny hafanana avo indrindra. Matevina noho ny fonon-tànana manipulator izy ireo ary mety tsara amin'ny raharaha any ivelany misy hazavana kely.
Ianao no mila fampiononana sy fiasa mety indrindra. Ny fiezahana hamita tetikasa amin'ny fonon-tànana izay lehibe loatra dia matetika foana. Ankoatr'izay, satria ny ankamaroan'ny fitaovana fanamafisam-peo dia mamandrika ny hafanan'ny vatan'olombelona amin'ny alàlan'ny paosin-drivotra, ny fonon-tànana izay kely loatra dia afaka manery ny paosin-drivotra, amin'izay hampihena ny fihazonana hafanana.
Manamboatra maro ny tabilao habe hanampiana anao hisafidy fonon-tànana ririnina tsara indrindra ho an'ny tananao. Manampy izany satria mety tsy mitovy amin'ny haben'ny mpanamboatra ny habeny. Mety manana toerana amin'ny marika iray ianao ary toerana eo afovoany amin'ny marika iray hafa. Azonao atao ny mampiasa latabatra habe samihafa handrefesana ny tananao ary manapa-kevitra fa ny kely, salantsalany na habe lehibe dia tsara indrindra ho an'ny marika manokana.
Ny fonon-tànana misy sosona iray monja dia tsy afaka miaro ny tananao amin'ny hafanana mangatsiaka na amin'ny rivotra, lanezy na orana. Ny fonon-tànana amin'ny ririnina tsara indrindra dia tokony hanana sosona fitaovana marobe, izay afaka miara-miasa hanafana hatrany.
Ny akorandriaka ivelany vita amin'ny hoditra na zavatra vita amin'ny sentetika dia afaka miaro ny tanana amin'ny rangotra sy ratra, ary koa manakana ny rivotra sy ny rano tsy hiditra. Ao anatiny, ny sosona volon'ondry, volon'ondry na polyester insulation dia manampy amin'ny fihazonana ny hafanan'ny vatana sy ny hafanana azy. Hatreto, ny volon'ondry dia iray amin'ireo fitaovana insulation termal tsara indrindra. Na dia amin'ny toetr'andro mando aza, ny volon'ondry dia afaka mitazona hafanana, izay midika fa ny hatsembohana dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fampiononanao. Ny volon'ondry dia ambany indrindra, ny asany dia mitovy amin'ny volon'ondry, fa ny fahombiazany dia ambany. Ny polyester no mahomby indrindra amin'ireo safidy telo ireo.
Raha tototry ny hatsembohana amin'ny fonon-tànana ny tananao dia mety ho very ny sarom-bolo rehetra amin'ny fonon-tanana. Ny fonon-tànana misy fofonaina kely dia misakana ny tanana tsy ho be hafanana, mamela ny rivotra mafana hitsoaka nefa mitazona mari-pana milamina. Ny kofehy voajanahary toy ny volon'ondry dia miaina kokoa noho ny fibres synthetic. Ny fonon-tànana vita amin'ny hoditra na rawhide miaraka amin'ny nylon ao aoriany dia manome fofon'aina sasantsasany nefa tsy mampiseho ny tanananao amin'ny singa samihafa.
Ny fonon-tànana amin'ny ririnina dia tsy maintsy tantera-drano. Ankoatry ny fanondrahana ny tananao amin'ny mari-pana mangatsiaka dia tsy misy fomba azo antoka intsony hanimbana ny hoditrao, ny rantsan-tànanao, ny fiafaran'ny nerveanao ary ny fahalalahanao. Ny fonon-tanana vita amin'ny fingotra dia afaka manakana ny fidiran'ny rano, ka na dia tsy mifoka rivotra aza izy ireo, dia safidy tena tsara rehefa miasa amin'ny orana sy ny oram-panala. Ireo fitaovana izay tsy tantera-drano (toy ny hoditra sy hoditra) dia azo tsaboina amin'ny alàlan'ny fantsom-pandrefesana sy additives mba hamoronana rano misosona ka mahatonga azy tsy hiditra.